Khin Maung Chin: ကျနော်ကြိုက်၏..ကျနော်မကြိုက်၏.. (Tag Post)
အိပ်ယာပေါ်ခေါင်းချလိုက်တာနဲ့အိပ်ပျော်တတ်တာကိုကြိုက်ပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ဘယ်တုန်းကမှ အဲဒီ့အကျင့်ကောင်းကိုမွေးလို့မရလို့ပါ။ တိုက်တွေကားတွေနဲ့နေနိုင်တာကိုအားမကျတတ်ပါဘူး..။ အဲလိုအိပ်ပျော်လွယ်တာကိုပဲအမြဲအားကျတတ်ပါတယ်။ :)
ကိုယ်ခန္တာသန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာနဲ့စမတ်ကျကျနေထိုင်တာကိုအရမ်းဖီးလာပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ဆဆနေတတ်သူများကိုလုံးဝကြည့်မရပါ.....:P မိန်းကလေးတွေကိုသာရည်ရွယ်ပါတယ်။
အရင်မသုံးခဲ့ပေမယ့်အေးတဲ့နိုင်ငံရောက်လာပြီးတော့မျက်နှာကြမ်းတမ်းမနေအောင် ကရင်မ်တစ်ခုခုလိမ်းပါတယ်။ မလိမ်းရရင်မနေတတ်တော့လို့ပါ....:P
ကုသိုလ်ကံကောင်းတယ်ပြောမလား၊ဆိုးတယ်ပြောမလားမသိဘူးဗျာ..။ ကိုယ်တိုင်ထမင်းဟင်းကောင်းကောင်း မချက်တတ်လို့ပဲလားမသိဘူး ချက်မိသမျှကိုသဘောကျစွာစားတတ်တာ ကျေနပ်စရာပါ။ (ကိုယ်မှမစားရင်ပစ်ရမှာစိုးလို့)....:P ဆိုင်မှာတော့မြန်မာပြည်မှာနေကတည်းက ဝယ်စားလေ့စားထမရှိပါ။
( ဘလန်းဂျား လုပ်တဲ့သူရှိရင်တော့အုပ်ပါတယ်...) တာရေမာ့ကာစေးလို့ပြောလိုက်ပြီးတာပဲလေ:P
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးတီရှပ်နဲ့ဂျင်းပင်ဝတ်ရတာနှစ်သက်ပါတယ်...။ အိမ်မှာနေရင်တော့ဘိုးဘွားဘီဘင်ရိုးရာဝင်တဲ့ ပုဆိုးပဲကြိုက်ပါတယ်..။လွတ်လပ်လို့ပါ။
အရက်ဘီယာအနံ့ပင်ခံလို့မရပါ။သောက်တတ်သူများကိုတော့လက်ခံပါတယ်။ သူငယ်ချင်းမြန်မာပြည်သားတွေ ကျနော့်အိမ်မှာ(တစ်ယောက်ထဲနေလို့)ခဏခဏဝိုင်းတတ်ကြပါတယ်။ ကျနော်ကတော့အိပ်ခန်းထဲကမထွက်တော့ဘူးပေါ့...။ (တော်သေးတယ်သူတို့တွေကဒီပို့စ်လာဖတ်ကြမှာမဟုတ်လို့...) ခြုံပြီးပြောရရင် သူတို့ပြောကြသလို ကျားတွေဆင်တွေမစီးတတ်ပါ။ မိကျောင်းတော့.....အဲ အဲ..ပေါ်ကုန်တော့မှာပဲ...:P အမှန်ကစီးကရက်ကြိုက်တာကိုပြောချင်တာပါ..။ ကိုမောင်(စွယ်စုံကျမ်း) ရေ... စီးကရက်ခဲပြီးကီးဘုတ်ရိုက်နေတာတွေ့ရတော့ အဖော်ရပြီဆိုပြီးဝမ်းသာမိသဗျာ..။ Dunhill Dua puloh ဘယ်ဈေးဝယ်သောက်နေရလဲဗျာ? အဟမ်း အဟမ်း...။ ကြုံလို့မေးလိုက်တာပါ..။
ဘော်ဒီအနေနဲ့ကတော့အနေတော်လေးပဲကြိုက်ပါတယ်..။ မောင်ဗလတွေလို ဂျင်မ်မှာသွားကစားတာပင်ပမ်းတယ်ထင်လို့တခါမှသွားမကစားပါဘူး..ရေတော့ကူးလေ့ရှိပါတယ်။
ကျနော့်ဘော်ဒီလား? ကျနော့်ဘော်ဒီအလေးချိန်ကတော့ ကီလိုနဲ့ပြောရင် ကီလို 70 နီးပါးပါပဲ။ (ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမှချိန်ထားတာနော်)
အရပ်အမောင်းကတော့ 167 cm ပါ။ ငါးပေလေးလက်မလောက်ပေါ့..။ (မဆိုးပါဘူးနော်:P)
အမူအကျင့်ကိုပြောရရင်ထွေထွေထူးထူးတော့မရှိပါဘူးဗျာ..။ သူငယ်ချင်းမင်တတ်တယ်။ တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုသဘောကျတယ်။ လဘ္ဖက်သုပ်တစ်ပွဲနဲ့ ကွန်ပြူတာရှေ့ထိုင်နေရတာနှစ်သက်တယ်။ (ပြီးရင်တော့အိမ်ပြင်ထွက် မီးခိုးထုတ်တာပေါ့:P)
လမ်းလျှောက်ရင်တော့မြန်မြန်လျှောက်တတ်ပါတယ်....(တော်ကြာကိုယ်မစီးတတ်တဲ့ကျားတွေ၊ဆင်တွေ နောက်မှာပါလာမှာစိုးလို့.....:P) သူများတွေအပေါ်မှာဘယ်တော့မှအနိုင်မယူတတ်ပါဘူး။ ရှုံးသွားရတဲ့အရသာကိုမုန်းလို့ပါ..။ ကိုယ်ကခဏခဏရှုံးတယ်လေ:(
ကျနော့်ကိုနားလည်နိုင်မယ့်သူကိုပဲ စောင့်နေတာပါ..။ခုထိတော့မတွေ့သေးဘူးပေါ့..။ ရုပ်ချောဖို့မလိုပါ..(ကိုယ်ကချောပြီးသားဆိုတော့...အဟတ်..အဟတ်..) နားလည်တတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်..။
(ခုနေမှ မကြော်ငြာရင်နောင်ကိုအခွင့်အရေးရဖို့မသေချာတော့ဘူး) .....တန် တန့် တန်...။
အဲလိုတွေခုမမြင်ရတော့ပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာနေတုန်းကဆို အနားကပ်ပြီး ကလိဖမ်းထိုးတတ်တယ်။ (မသိမသာလေးပေါ့).....:P
ဘလော့မှာဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်လည်ပြီးခြေရာလက်ရာထားခဲ့ရတာပျော်ပါတယ်..။ ကျနော့်ဆီမှာလာထားသွားရင်ပျော်သလိုပေါ့..။ သို့သော်စာရေးလက်မတက်လာသေးပါ.။ အချိန်လုနေရတာလည်းပါတာပေါ့ဗျာ..။:(
အွန်လိုင်းပေါ်မှာအကြိုက်ဆုံးကတော့ ကိုပုသိမ်သားလေးဖြိုးဝေပို့ပေးတဲ့ ကွန်ဖူးFighting လေးပါ။
အစ်ကိုရေ..ကျေးဇူးပါနော်..။ အပြင်မှာအကြိုက်ဆုံးကတော့ ........မေမေ့လက်နဲ့သွေးပြီးလူးပေးခဲ့တဲ့ ငယ်ငယ်တုန်းကသနပ်ခါးအနံ့လေးပါ...။
လောလောဆယ်ဆူးလေဘုရားအထက်လမ်းကလေတဟူဟူးနဲ့ညညထိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့လဘ္ဖက်ရည်ဆိုင်ကို ပြေးပြီးထိုင်လိုက်ချင်ပါတယ်။ (ထရိတ်ဒါးကိုကြည့်လိုက်၊စိတ်ကူးလေးယဉ်လိုက်ပေါ့)
မရေးတတ်ရေးတတ်နဲ့ရေးလိုက်မိတဲ့ပို့စ်လေးမို့ ခေါင်းစဉ်နဲ့စာကိုယ်လွဲနေရင်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ။ ပထမဆုံးကြုံဖူးခြင်းဖြစ်တာမို့နားလည်ပေးကြမယ်ထင်ပါတယ်..။ အစ်ကိုအစ်မများကိုအတုယူသင်ကြားနေပါတယ်လို့ပြောပါရစေ...။ (ဟီ ဟိ..ပိုင်သကွာ...)
ဘလော့မှာအမှတ်တရအဖြစ်ဆုံးသူတွေကတော့ ပထမဆုံးမမ်ဘာဝင်ပေးခဲ့တဲ့မမ အိန်ဂျယ်လှိုင်း၊ ကိုနန်းရှင်၊ ပြီးတော့ပထမဆုံးကွန်မန့်ထားသွားပြီးခံစားဖတ်ရှု့ပေးခဲ့တဲ့ မမရွှေပြည်သူ ၊ တလျှောက်လုံးအားပေးစကားပြောကြားခဲ့ပြီး နွေးနွေးထွေးထွေးတွဲခေါ်လာခဲ့တဲ့ မမ ဂျပ်စ်မင်း(တောင်ကြီး)..။ နောက်ပြီး သတင်းတွေမပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကိုနေဇော်လင်း နဲ့ ကိုပဥာက်(ထာဝရသစ္စာ)..ကိုဒုတိယလူ ပထမ မရဖူးလို့ထင်တယ်:P (ကျနော်ကတတိယလူပေါ့ဗျာ) နောက်ပြီး ဂျာမဏီကညီမလေး Dream(အိပ်မက်စေရာ) နဲ့ စင်္ကာပူက ညီမလေး ချိုချဉ် (Candy).. နေ့စဉ်လာလာဆုတောင်းပေးတဲ့ချစ်ခင်လေးစားစရာကောင်းတဲ့ အန်တီတင့်..... နောက်ပြီးတော့ မမခင်ဦးမေ ..လူသစ်လူဟောင်းမခွဲခြားတတ်တဲ့နည်းပညာသမား ကိုဖြိုးဝေ နဲ့ ကိုနေမင်းမောင်မောင်... စတဲ့..စတဲ့.လူတွေအားလုံးပေါ့ဗျာ..။ လောလောဆယ်နာမည်မရေးမိသေးတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးကျန်ပါသေးတယ်..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုလို ဘာဘာညာညာမခွဲခြားကြပဲ ညီရင်းအစ်ကိုမောင်နှမတွေလို ဆက်ဆံပေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံး အားလုံးကို ကျနော်KMCဒီနေရာကနေ ကျေးဇူးတင်ဂါရဝပြုလိုက်ပါတယ်..။ ဒီတဂ်ပို့စ်လေးကိုရေးဖို့တဂ်လိုက်တဲ့ မမအိန်ဂျယ်လ်နဲ့ကိုမောင်(SSK) ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ဒီထက်မကချစ်ခင်ရင်းနှီးမှု့တွေကို ပျော်ပျော်ပါးပါးရရှိနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ..။
ခင်မင်ရတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအကြောင်းတွေလည်းသိရအောင်လို့ ဆက်ပြီးတဂ်လိုက်ပါပြီ..။ အားရင်ရေးပေးကြပါလို့အနူအညွှန့်မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။
Aug 1, 2011, 2:57:00 AM
အကို ကြိုက်၏ မကြိုက်၏ ကို ဖတ်သွားပါတယ် ။
Aug 1, 2011, 3:01:00 AM
Aug 1, 2011, 4:49:00 AM
အဟီး.. ဒီလို Tag ဆိုရင်တော့ဖြစ်တယ်.. စာရေးဆရာတွေလို စာလှလှပပ မရေးတတ်ပေမယ့်.. ကိုယ့်အကြောင်းပြောပြရုံဆိုရင်တော့ ရတယ်... :P
Aug 1, 2011, 5:04:00 AM
ချင်းကလေးရဲ့ ကြိုက်တာ မကြိုက်တာလေးတွေ သိသွားပြီနော်။ ဆုတောင်းတာက ဝါသနာတစ်ခုလေး)
Aug 1, 2011, 9:43:00 AM
မောင်လေးရေ တဂ်ပို့စ်လေးလေး ရေးပေးလို့ ကျေးကျေးနော်..
ကြိုက်မကြိုက်လေးတွေ သိသွားပြီ.. :)
Aug 1, 2011, 11:24:00 AM
Aug 1, 2011, 11:48:00 AM
@ ညီမလေးချိုချဉ်...ရတယ်ဆိုလို့ကျေးဇူးကြိုတင်ထားလိုက်မယ်။ @အန်တီ......အန်တီ့ဝါသနာကဝါသနာကောင်းလေးမို့ သွားသွားလည်မိတိုင်းကြည်နူးရပါတယ်ဗျာ။:-) @မမအိန်ဂျယ်လ်..ကျနော်ကလည်းကျေးကျေးပါနော်လို့........ @ ကိုစွယ်ရေ..(ဘုရား..ဘုရား ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေများထွင်ဦးမှာလဲဗျာ).... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ :P
Aug 1, 2011, 2:29:00 PM
Aug 1, 2011, 4:47:00 PM
ကိုချင်းရဲ့ ပို့စ်လာဖတ်တယ် မိုက်တယ်..ပေါ့ပေါ့ ပါးပါးပဲ..အားလုံးကြိုက်တယ် အဟိ.. ညလေး လား ..ရေးမှာ ပေါ့.. ကိုချင်း တဂ်တယ်ဆိုလို့ ညလေးတို့ ပျော်နေတာ ပထမဆုံးမို့လို့လေ
Aug 2, 2011, 9:32:00 PM
Aug 4, 2011, 7:12:00 PM
Aug 17, 2011, 4:08:00 PM
ကျားတွေ ဆင်တွေမစီးလို့ဂျာ ...
စကားပြောရင် ကိုယ်တိုင်လည်း စကားကျယ်ကျယ်မပြောတတ်သလို သူများပြောရင်လည်း မကြိုက်ပါ။
ဒါတော့ သားနဲ့တူုတယ်အကို ..
တူတဲ့အတွက် အရက်တိုက် ...
အမ် ... မုန့်ဝယ်ကျွေးရမယ်ဂျာ ...
နောက်မှ လာလို့ စိတ်မဆိုးနဲ့နော် ...
သားက မအားလို့ပါ။ ခင်ပါတယ်ဂျာ
Aug 18, 2011, 3:31:00 PM
ကိုနေဇော်လင်းခင်ဗျာ..မအားတဲ့ကြားကကျနော့်ပို့စ်ကိုတကူးတက အချိန်ပေးပြီးလာဖတ်တာဝမ်းသာမိပါတယ်...နောက်ကြုံတော့မှ Kota Raya မှာစားချင်တာစားဖို့အဲယောင်လို့...ကျွေးဖို့လာခဲ့ပါ့မယ်ဗျာ...။ Terimakasih Banyak Abang....:P